आहा बिचार Archives - Page2of 12 - AahaSanchar
Home आहा बिचार (Page 2)
बिनाराम खड्का कुनै दिन अज्ञानी अनाडी मनुवा ज्ञानको खोजीमा ऋषि आश्रम कुटीतिर लखरलखर लम्किन्छ । ऋषि कुटीभित्रै गुप्त तपस्यामा लीन । बाहिरतिर साइसुइ कोही नई । मनुवा खाक्क खुक्क खकार निकालेझैँ गर्छ । “अहम” “अँहहss” “ख्वाक्क” गर्छ । हावा मात्रै सुइय । बोल्दैन कोही पनि । “ऋषि स्वामीज्यू ।” मनुष्य…
आहा गज्जब ! : ह्याँती गर्ने कुरा
एमएल ओली तमाँइका आङ्नु फ्वाँस्या पाउटर टाँस्सिया ता लाई चाउरी पर्याउ छाल्ला पनि बाक्ल्याने रह्ैच हेर्नोई । ठूल्लैमान्नाउ ऐनान्नु आफ्नै अन्न्वार च्याँउदारी ता क्यार्न भन्ने हो र ? ज्यानले चोला फेर्रेल्यो छ जस्तो कस्तो न कस्तो लाग्ने भन्नु हुन्च । सग्लै मान्नाउ हात्ति तेख्खा बाउ छात्ति हेर्नोई । तमाँइको कार्याकइरम…
हाम्रो गाउँठाउँलाई पनि दार्जीलिङ बनाऔं
हरि जिज्ञासु धेरै जनाले जिन्दगीलाई यात्रा हो भन्छन् । साँच्ची हुन त जिन्दगी यात्रा पनि त हो । विभिन्न कामको शिलशिलामा नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेश घुम्नु र रमाउनुलाई पनि त यात्रा नै भनिन्छ । केहि कामको शिलशिलामा बैशाख २८ गते म दार्जिलिङको लागि दाङबाट यात्रा सुरु गरेँ । यात्रा…
तन्तरमन्तर : ह्याँती गर्ने कुरा
एमएल ओली ह्याँ धेरै आइया धेरै गइया । कोल्ले क्या कति द्याछन् ? क्या कति लग्याछन् ? एक एक हिस्सापकित्ताप इतिहासले रहक्याउँछ । अरुवा चेत्कान हराया पनि तमाँई हाम्रो इतिहास होसिल्लै छ भन्नु हुन्च । उइलैदेखि अइलसम्माले आ–आफ्नो बर्कत बुत्ताले धान्यासम्मौ नगर्या हुन र ? यो माँजो अभागी चाँदो कट्कटी…
बन्द संसार : ह्याँती गर्ने कुरा
एमएल ओली अइचेलौ यस्तो अनिकाले निद ता भइयो । कत्नाम्रो ओछ्यान्नु गुन्नली पर्याउँ थेँ हेर्नोई । “आज कारागारमा साइत्य कार्याक्रम छ गरे । जाने होइन बड्डौं ?” गिरीप्रसाद बुढाले छक्कालै फुनबाट डाक्केल्या । खप्पर पाउनासाथ कारागारौं साइत्य कस्तो हुँदोहोला भन्ने खुल्दुली लाइयो । चाचाँरै आँखा मिच्दै उठ्यिाँ भन्नु हुन्च ।…
हरि जिज्ञासु यार्सा नेपालको उच्च हिमाली जिल्लाहरुको हिमालको फेदहरुमा पाईने एउटा मुल्यवान जडिबुटी हो । यसलाई ठाउँअनुसार फरक फरक नामले चिनिन्छ । डोल्पा र रुकुमको केहि भागमा यार्सालाई किरा, च्याउ, जीवनबुटी लगायत अन्य नामहरुले चिनिन्छ । नेपालको पश्चिम भागमा पर्ने कर्नाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्ला जुम्ला डोल्पा र रुकुमको केहि…
राष्ट्रपति संग ग्रामिण महिलाहरुको अपेक्षा
हरि जिज्ञासु नेपाल एउटा सुन्दर र सानो देश भए पनि यहाँ विभेद, गरिबी र बेरोजगारी भने ठूलो छ । जातीय, बर्गीय र अन्य धेरै बिभेदको जरो बडो जोडले गाडिएको छ । यसको अन्त गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु बडो जोडतोडले लागि परेका छन् । तर सकिरहेका छैनन् । गनतन्त्र…
एमएल ओली अइल त्यसको खुप्पै महत्वछ । कुनै बेला घृणा, तृष्कार र अपमानित भइ माङ्थ्यो, बिचरा त्यल्ले । उइल घरका छाउनाछाउनीदेखि पाउनापाछीलाई भनेर सामाधामा गर्ने चलन थ्योे । ठूल्ठालीले मात्र भक्ने जात भनिन्थ्यो । मुख फेर्नेस मान्नेहरूले चाडपर्व मात्र पर्खिनुपथ्र्यो । दशैंका दिन मैन खाँमो र चाँदोमा टाँस्ने जुटाउन समेत…
सञ्चार क्षेत्रमा नआएको संघीयता
जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नबिकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ । मेगराज खड्का नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले केहि दिन अघि एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै…
भुकम्पले रुवाएको देशमा अझै राजनीतिले रुवाएको छ
हरि जिज्ञासु देश सानो छ । तर देशमा गरिबी र बेरोजगारी धेरै छ । यहि सानो देशलाई कहिले भुकम्पले रुवाउँछ । कहिले हावाहुरीले रुवाउँछ । कहिले बाढि पहिरोले रुवाउँछ । कहिले दुर्घटनाले रुवाउँछ । अझ बढि नेपालको फोहरी राजनीतिले रुवाउँछ । २०७२ बैशाख १२ गते शनिबार देशलाई महाभुकम्पले रुवाएको थियो…
मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम समापन